रिसले पनि निम्त्याउन सक्छ हृदयघात! – Health Post Nepal
रिसले पनि निम्त्याउन सक्छ हृदयघात!
२०७७ फागुन ६ गते ११:५६
रिसले सबैभन्दा पहिले भ्रम सिर्जना गर्छ। भ्रमले मस्तिष्कमा असर गर्छ। मस्तिष्कमा असर भएपछि व्यक्तिको तर्क गर्ने क्षमता घट्छ। त्यसपछि व्यक्तिको पतनको बाटो सुरु हुनछ। क्रोधले व्यक्तिलाई सफलताबाट असफलताको बाटोमा लैजान्छ।
यो गीताको उपदेश हो। रिसले मानिसको मस्तिष्कमा मात्र नभएर मुटुमा पनि धेरै नराम्रो असर गर्नसक्छ। दुई वर्ष पहिले हस्पिटलमा एकजनासँग मेरो डिस्कर्ष भयो। मलाई मन नपर्ने कुरा गर्दा रिस उठ्यो। यो विवादमा अप्रिय शब्द प्रयोग भएको थिएन। तर, मलाई रिस लागेको थियो। त्यो डिस्कर्षपछि घर आउँदै गर्दा मलाई असहज अनुभव हुनथाल्यो।
गाडि चलाउँदा मेरो देब्रे छातिमा असहज महशुस भयो। घर आइसकेपछि मैले रिसले हार्टमा कस्तो असर गर्छ भनेर हेर्नथाले। मैले २०१५ मा जुरोपिएन जनरलमा प्रकाशित रिसर्च भेटाए। त्यसमा रिस उठेका व्यक्तिमा हार्टअट्याक हुनसक्ने कुरा उल्लेख थियो।
त्यसमा भएको एक/दुई कुराले मलाई सोच्न बाध्य पार्यो। त्यसको केही दिनपछि मैले मेरो परिवारका सदस्य र केही साथिलाई भेला गरेर रिसले मुटुमा कसरी असर गर्छ भन्ने कुरा प्रस्तुत गरेको थिए।
१३ हजारभन्दा बढीमा मुटुमा ब्लकेज हुनेहरूमा गरिएको अनुसन्धानले बढी रिसाउने व्यक्तिमा मुटुरोग र मस्तिष्क घातको खतरा दुईदेखि तीन गुणा बढी हुन्छ। अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा गरिएको एउटा रिसर्चमा २००६ देखि २०१२ सम्म हटट्याक भएका मानिसमा रिसर्च गरिएको थियो। उनीहरूलाई हार्टअट्याक हुनुभन्दा २४ घन्टा पहिले रिस उठेको थियोकी थिएन भनेर सोधिएको थियो।
२.२ व्यक्तिमा हार्टअट्याक हुनुभन्दा पहिले एकदमै धेरै रिस उठेको रहेछ। कम रिस उठ्नेभन्दा रिस उठ्नेमा हार्टअट्याक हुने जोखिम आठ गुणा बढी हुने पाइएको छ। त्यसैले धेरै रिस उठ्यो भने हार्टअट्याक हुनसक्छ।
मलाई त्यो रिसर्चमा भएको एउटा कुराले निकै साच्न बाध्य तुल्यायो। ती रिसका घटना कस्तो–कस्तो समयमा उठेको भन्ने उल्लेख थियो। २९ प्रतिशतमा परिवारका मानिसबीच विवाद भएर रिस उठ्दा हार्टअट्याक भएको रहेछ। त्यसपछि मित्रहरूसँग रिस उठेको पाइयो। काम गर्ने ठाउँमा रिस उठेको पाइयो। र, त्यसपछि ड्राइभिङ गर्ने क्रममा ट्रफिकमा रिस उठेर हार्टअट्याक भएको पाइयो।
रिस उठ्दा कसरी हार्टअट्याक हुन्छ भन्ने लाग्नसक्छ। कुनै पनि हार्टअट्याकको घटना हेर्दा ट्रिगर पाइन्ट हुन्छ उत्तेजना। रिसले हार्टहट्याक गर्नसक्छ भने केही कारणले मानिसलाई रिस उठिरहेको हुन्छ। हार्टअट्याक पनि केही कारणले भएको हुन्छ। जस्तै कसैलाई इन्फेक्सन, संक्रमण विशेष गरेर फोक्सोको संक्रमण भएपछि, कहिले काहि इमोस्नल अफसेट भयो भने, कहिलेकाही स्टेशको वातावरण भयो भने, कहिले व्यक्तिले औषधी छोडिदियो भने हार्टअट्याक हुनसक्छ। त्यस्तै रिस मात्रै उठेर पनि कसैलाई हार्टअट्याक हुनसक्छ। रिस उठ्दैमा सबैलाई हार्टअट्याक हुन्छ भन्ने छैन। यसको मेकानिजम के हो? कससरी यसले हार्टअट्याक निम्त्याउन सक्छ? भन्ने हो।
हार्टअट्याक भएको बेलामा हार्ट डिजिजको बिरामीलाई रिस उठ्यो भने उसलाई हार्टअट्याक हुने जोखिम एकदमै बढी हुन्छ। मुटु रोगको जोखिममा भएका व्यक्तिलाई रिस उठ्यो भने हार्टअट्याकको सम्भावना बढी हुन्छ। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, धुमपान सेवन गर्ने, उच्च कोलेस्ट्रोल भएका व्यक्तिलाई रिस उठ्यो भने हार्टअट्याक हुने जोखिम बढी हुन्छ।
कहिले काहि स्वस्थ व्यक्तिलाई पनि हार्टअट्याक हुनसक्छ। यो कुरा पत्याउन गाह्रो भए पनि विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेको छ। अब कुरा आउँछ रिसले कसरी एउटा स्वस्थ व्यक्तिलाई हार्टअट्याक गर्नसक्छ भन्ने प्रश्न आउँछ। प्याथोफिलोजिमा जाँदा रिस उठ्ने वित्तिकै हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमका हार्मोनहरूको उत्पादन हुन्छ। जुन हामी महशुस पनि गर्छौं। हामीलाई गर्मी लाग्ने, हातहरू काम्ने, अलि असहज अनुभव हुनथाल्छ। त्यो हार्मोनहरूको कारणले हो। जसलाई हामी क्याटाकोल एमाइन्स भन्छौं। जुन एडइनर्जिक रेस्पोन्स भनिन्छ। त्यो हाम्रोनको स्तर एकदमै बढ्यो भने हार्टरेट बढाउने जोखिम हुन्छ। ब्लडप्रेसर बढ्ने हुन्छ। र, मुटुका रक्त नली तथा विभिन्न रक्त नलीलाई साँघुरो बनाउने हुन्छ।
यसरी साँघुरो बन्दा त्यसमा क्लोनिन टेन्डेन्सी पनि बढ्छ। जसले गर्दा रक्त प्रवाहमा टर्विलेन्स आउनथाल्छ। मुटुको नलिमा कोलेस्ट्रल लिएर बाई लिएर जम्दा प्याक रब्जर हुन्छ। मुटुमा कोलेस्ट्रोल बढेको ठाउँमा रिस बढेको कारण त्यसको रियाक्सनले प्याट रप्चर हुन्छ।
रप्चर हुँदा त्यहाँ क्लप्ट जम्छ। रिसको कारणले कलेन्टि लेन्डेन्सी बढेको हुन्छ। जसले रिक्लट बन्छ। रिक्लट बनेपछि मुटुको रक्त नली बन्द हुन्छ। र, व्यक्तिलाई हार्टअट्याक हुन्छ।
कोलेस्ट्रोलको प्ल्याक सबैमा हुन्छकी हुँदैन भन्ने प्रश्न आउँला। रिसर्चका अनुसार १५ वर्षको बच्चादेखि सबैको मुटुमा अलिअलि कोलेस्ट्रोलको लिएर हुन्छ नै। यो फुट्न समय लाग्दैन। एउटा सानो व्याड इन्सिडेन्ट, व्याड मोमेन्ट, व्याड डिस्कर्षनले एउटा व्यक्तिको जीवन कहाँबाट कहाँ जान्छ। रिस नै लागेन भने जीवनमा कहिले पनि हार्टअट्याक नहुने हुनसक्छ।
त्यसैले स–साना कुराबाट जीवनमा जोगिनुपर्छ। त्यसैले हामी कसैको हार्टअट्याकको कारण नबनौं। कसैलाई रिस नलगाउँ। रिस लाग्यो भने हाम्रै जीवनलाई क्षति गर्ने हो। कसैलाई रिस लगायौं भने हाम्रै मान्छेको जीवनमा क्षति पु-याउने हो।